Taskade: A Chaiyo-Inguva Task Maneja ane Vhidhiyo uye Kubatana Kugadziridza | Martech Zone
Taskade: A Chaiyo-Nguva Rekushandisa Maneja ane Vhidhiyo uye Kubatana Kugadziridza
China, June 28, 2018 China, April 1, 2021 Douglas Karr
Mwedzi uno wadarika, ndakakumbirwa nemafemu maviri akasiyana kuti ndishandise maitiro ekutonga emapurojekiti edu. Ivo vaviri vanotyisa. Isa zvakajeka; manejimendi manejimendi ari kuuraya chibereko changu. Zvirongwa zve manejimendi manejimendi zvinofanirwa kuve nyore kushandisa kana iwe uchida kuti zvikwata zvako zvibudirire. Ini ndinotenda zvakapusa basa manejimendi mapuratifomu, uye ndozvinoita Basa yakagadzirirwa.
Chii chinonzi Taskade?
Taskade ndeye-chaiyo-nguva yekudyidzana app kune ako mazano, zvinangwa, uye zvezuva nezuva mabasa. Ronga pfungwa dzako, ita kuti zvinhu zviitwe, nekukurumidza uye nehungwaru. Checklists, zvinyorwa, zvinyorwa, isu takufukidza.
Taskade inozvishambadza pachayo seyakagadziriswa, yakanaka, uye inonakidza… ine chokwadi chekubatana maficha:
tauriranai - kurukurai, batanai, uye gadzira runyorwa rwebasa mune chaiyo-nguva.
Workflow - ronga uye gadzirisa yako marondedzero emabasa kuti aenderane nenzira yaunoshanda nayo.
Nzvimbo yebasa -a nzvimbo yekushandira iunganidzwa yezvinyorwa kana manotsi aunogona kukoka vamwe kuti vajoine.
chikwata - ipa mabasa, share manotsi, uye track timu kufambira mberi.
Templates - wakawana basa rinodzokororwa? Takura imwe yematemplate eTaskade kuti utange purojekiti yako.
Kupfuura zvese, Taskade ine mafomu kune yako nharembozha iOS uye Android chishandiso, kana yako Mac kana Windows desktop. Vakavaka zvakare makuru ekuwedzera kune ese maviri Chrome uye Firefox. Taskade parizvino vakasununguka - ine Pro vhezheni iri kuuya munguva pfupi.
Saina Chikwangwani cheTaskade
Tags: bhurawuza maapplicationbrowser extensionyemahara task chishandisoMobile Appskwezvinhurunyorwa rwemabasabasa manejimendibasaWorkflownzvimbo yekushanda
Idzo dzePamusoro 5 Zvikonzero Brands Kurwira Kuenzanisa Yemagariro ROI